Soo dejisan Free HD Converter 2.0 – Vessoft
Soo dejisan Free HD Converter
Free HD Converter – software ah si loogu badalo diiwaanka ka HD video kamaradaha qaabab kala duwan. Software ayaa ku siinayaan shaqada leh qaabab sida: MP4, FLV, AVI, Mpg, wmv iwm ayaa Free HD Converter uu leeyahay qalab ay u Customize tayada video, ballaarinta, FPS iyo size of file wax soo saarka. Software wuxuu suuragelinayaa in lala socdo habka ay diinta ee files video in log ka dhisay-in ka. Free HD Converter sidoo kale taageertaa processing Dufcaddii faylasha la eegis video ah.
Conversion diiwaanada ka caan HD video kamaradaha
Kartida aad u ogaatid
Support for files Dufcaddii
Free HD Converter Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... Action! 1.31.5
العربية, English, Français, Español... Dolphin 4.0.2 iyo 4.0.8700 rc
العربية, English, Français, Español... Freenet 0.7.5